Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Finland War Cusub » Air France waxay aaminsan tahay Santa Claus wax ka yar $ 400
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Finland War Cusub • France Breaking News • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air France ayaa Duulimaadyo u Furtay Magaalada Rasmiga ah ee Santa Claus
Air France ayaa ku dhawaaqday duulimaadyo jiilaalka 2021-2022 ka Paris, France ilaa Rovaniemi, Finland.
Waddada Paris-Rovaniemi waa furitaan muhiim u ah socdaalka ka soo kabashada dalxiiska.
Socotada Faransiisku waxay ahaayeen kooxda labaad ee caalamiga ah ee ugu weyn hoyga Rovaniemi.
Furitaanka wadadu waxay xaqiijineysaa koboca mustaqbalka Rovaniemi iyo dalxiiska caalamiga ah ee Lapland.
Air France ayaa ku dhawaaqday duullimaadyo toos ah oo ka duulaya gegida diyaaradaha Charles de Gaulle ee magaalada Paris kuna wajahan Rovaniemi horraantii December.
Air France ayaa ku dhawaaqday laba duulimaad oo toddobaadle ah oo ka bilaaban doona December 4, 2021. Waddada jiilaalka waxay bixin doontaa duulimaadyo ilaa Maarso 5, 2022.
“Waxaan ku faraxsanahay waddada cusub ee ay ku dhawaaqday Air France. Xiriirkan cusub wuxuu soo saari doonaa socdaal badan oo Lapland ah wuxuuna muujinayaa soo noqoshada xiriirrada duulimaadka ee Finland iyo Yurub, ”ayuu yiri Petri Vuori oo mas'uul ka ah Horumarinta Iibka iyo Horumarinta ee Finavia.
Paris - Waddada Rovaniemi waa furitaan muhiim u ah socdaalka ka soo kabashada dalxiiska iyo si loo hubiyo koboca mustaqbalka ee safarada caalamiga ah ee Rovaniemi iyo Lapland.
“Tirakoob ahaan, socotada Faransiisku waxay ahaayeen kooxda labaad ee ugu weyn ee caalamiga ah ee Rovaniemi. Jidka tooska ah ee dhowaan lagu dhawaaqay ayaa la rumeysan yahay inuu si wanaagsan ugu adeegi doono shaqsiyaadkaas safrayaasha ah iyo hawl wadeennada dalxiiska, oo horey u dhigay Rovaniemi inay noqoto meel caan ah oo jiilaal ah, ”ayay tiri Sanna Kärkkäinen Agaasimaha Maareeyaha Booqashada Rovaniemi.
Rovaniemi waa caasimada Lapland, waqooyiga Finland. Ku dhawaad ​​gebi ahaanba burburay intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, maanta waa magaalo casri ah oo loo yaqaanay inay tahay magaalada rasmiga ah ee Santa Claus, iyo daawashada Nalalka Waqooyi. Waxay hoy u tahay Arktikum, madxaf iyo xarun saynis oo sahamisa gobolka Arctic iyo taariikhda Lapland ee Finland. Xarunta Sayniska ee Pilke waxay ku soo bandhigaysaa bandhigyo is -dhexgal ah oo kaymaha waqooyiga ah.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 38